ကိုလိုနီသည် Porsche ၏ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာကင်ပိန်းအတွက်တယ်လီဆုနှစ်ခုရရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Porsche ရဲ့ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာကင်ပိန်းများအတွက်ကိုလိုနီသိမ်းသွင်း ထား. နှစ်ဦး Telly ဆုပေးပွဲ
Porsche - ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာကင်ပိန်း - Telly ဆုကို Winner / ကိုလိုနီ
Porsche ရဲ့ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာကင်ပိန်းများအတွက်ကိုလိုနီသိမ်းသွင်း ထား. နှစ်ဦး Telly ဆုပေးပွဲ
အဆိုပါချီကာဂို-အခြေပြုကုမ္ပဏီရဲ့ရှေ့ဆောင်လူမှုမီဒီယာတိုင်း၎င်း၏အဖွဲ့သို့ငွေက၎င်း၏က 'ဒေါင်လိုက် Format ကိုအသုံးပြုခြင်း' '& 40th နှစ်ပတ်လည် Telly ဆုပေးပွဲမှာ' 'ကို Creative တည်းဖြတ်' 'အဘို့ဆွတ်ခူးရရှိ၏ရှေ့သို့-အတွေးအခေါ်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝ-Service ကိုစှမျး
Porsche ရဲ့ဒေါင်လိုက်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အလုပ်, '' Curves, ', ငွေနှင့်အတူယခုနှစ် Telly ဆုပေးပွဲကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်' ဆိုတဲ့ဒေါင်လိုက် Format ကိုအသုံးပြုခြင်း '' အဖြစ်များအတွက်လူမှုမီဒီယာကဏ္ဍအနိုင်ရရှိ '' ကို Creative တည်းဖြတ်ခြင်း။ ' ချီကာဂိုအခြေစိုက်အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် postproduction ကုမ္ပဏီ၏လူမှုမီဒီယာဒါရိုက်တာ, ဂျင်မီပဲ့နဲ့ကို Creative ဒါရိုက်တာဂျနီဖာ Moody, စီမံကိန်းအပေါ် Cramer-Krasselt နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ပဲ့နှင့် Moody ဇာတ်ညွှန်းနှင့် 16 ×9ရိုက်ကူးတဲ့ရေကူးကန်နှင့်အတူပေးအပ်နှင့်ပွေးလေ၏ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က Porsche ယခင်ကလူမှုရေးမီဒီယာအာကာသအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသောဂရပ်ဖစ်ချဉ်းကပ်မှုထက်ကျော်လွန်နေရာအပိုင်းအခြားတွန်းကြောင်းအတိုဗီဒီယိုများဆက်တိုက်အတူတက်ရောက်လေ၏။ အဆိုပါဒီဇိုင်းအဖွဲ့က High-end အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဗေဒကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းဆွဲဆောင်မှုအမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းဖန်တီးခဲ့သည်။
"ဒါဟာအေဂျင်စီရဲ့ဖန်တီးမှုများနှင့်အတူကြီးမြတ် Partners ပဲ" ဟုပဲ့ကပြောပါတယ်။ "ယောဟနျ Doessel နှင့်ယောဟန် McKenzie တကယ်အကြောင်းအရာဒေါင်လိုက်အာကာသအတွင်းတူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုနှင့်ထူးခြားသောနှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့လူမှုမီဒီယာ content တွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်စွမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားနိုင်သောအရာကို reimagining ၏စိတ်ကူးနှုတ်ဆက်ပြီး။ သူတို့ကဂျနီဖာနဲ့ကျွန်မပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်တွင်မျက်စိ-ဖမ်း, အမှတ်ရစရာအကြောင်းအရာများအတွက်နှင့် Porsche များအတွက်အောင်မြင်သောနှင့်ဆုရလူမှုမီဒီယာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကယ်နှုတ်တော်မူသောအကြှနျုပျတို့အကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်း, အပ်ပေးတော်မူ၏။ "
ဂျိမ်းပဲ့, လူမှုရေးမီဒီယာဒါရိုက်တာကိုလိုနီ / ချီကာဂို
"တိုတို-form ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတခုတခုအပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမြင်အာရုံသောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြကြောင်းအဆောက်အဦးဒီဇိုင်းကိုမောင်းနှင်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီးပွားဖြစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုဒြပ်စင်ဖန်တီးခြင်းမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်စဉ်းစား၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့်လမ်းလိုအပ်တယ်," မာရိ Caddy ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာထုတ်လွှင့်ပြတင်းပေါက်ထွက် storytelling နှင့်တစ်ဦးချင်းစီပလက်ဖောင်းများအတွက်အများဆုံးသက်ရောက်မှုအကြောင်းအရာဒီဇိုင်းရန်အကွက်ကိုပြင်ပမှာစဉ်းစားအကြောင်းကိုသင်သိအရာအားလုံးပစ်ကြာပါသည်။
"ကျနော်တို့နေတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေအသီးအသီးကို client ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှုကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာလက်ဆောင်အခွင့်အလမ်းများအများဆုံးအားသာချက်ယူတဲ့အယူအဆအတွက်အာရုံစူးစိုက်," ပဲ့ကပြောပါတယ်။ "ဒီအမျိုးအစားထဲမှာအလုပ်လုပ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတသမတ်တည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' ပစ်မှတ်စျေးကွက်နှင့်အတူဆက်သွယ်ဆန်းသစ်သောအကြောင်းအရာများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု၏ဤအဆင့်ကိုပေးသွားလာရင်းမှလူမှုရေးမီဒီယာအလုပ်၏ကြီးထွားလာသောတန်းစီဇယားအဘို့အအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကိုလိုနီထူထောင်ခဲ့သည်။ "
ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အဖွဲ့ VFX ဘို့အဆိုကိုဒီဇိုင်းနှင့် Flame ဟာအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်တည်းဖြတ်ဘို့အတွက် Adobe က Adobe Premiere ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကိုလိုနီခေတ် တစ်ဆုရချီကာဂိုအခြေစိုက်ဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့, ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်ထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါကဖျော်ဖြေ, အကြောင်းကြားနှင့်ပရိသတ်များအတွက်လှုံ့ဆျောပေးကြောင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးရန်ချောမွေ့စွာ Full-service ကိုချဉ်းကပ်နှင့်အတူအိမ်သူအိမ်သားပြီးသွားသည်။ အမျိုးသားနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Porsche, မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ Facebook က, Samsung Estee Lauder ကကို Nintendo, Gillette, Walmart နှင့်ပက်စီအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ clients များ, ။ , ခြီးမွှောကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုအမြင်အာရုံပုံပြင်များကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအခွက်တဆယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ကပဌနာပြုသောအမှတ်တံဆိပ်များအနည်းငယ်ရှိပါတယ် viewer ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှသူတို့ကိုဆက်သွယ်။
ခေါင်းစဉ်: 'Curves' '
Telly ဆုပေးပွဲ: လူမှုဗီဒီယို: အဆိုပါဒေါင်လိုက် Format ကိုအသုံးပြုခြင်း - Silver, Winner
လူမှုဗီဒီယို: တည်းဖြတ် - Silver, Winner
အေဂျင်စီ / သုံးစွဲသူ: Cramer-Krasselt
အကြီးတန်းအနုပညာဒါရိုက်တာ: ယော McKenzie
အကြီးတန်း Copywriter: ယော Doessel
တွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူ: Kristin Vayda
ဒီဇိုင်း + အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကုမ္ပဏီ: ကိုလိုနီခေတ်ချီကာဂို
Editor ကို / လူမှုမီဒီယာဒါရိုက်တာ: ဂျင်မီပဲ့
ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ: ဂျနီဖာ Moody
အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ: မာရိသညျ Caddy
motion ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ: Jeff Borowiak
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်း SJGolden - လူမှုမီဒီယာ လှံ & Arrows Telly ဆုချီးမြှင့် / လူမှုမီဒီယာ ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-13
ယခင်: wTVision ပနားမားရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတိုးပွားလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် Ultimatte အပေါ်မှီခို
နောက်တစ်ခု: BMW ကား, UCSF ကျန်းမာရေး, သူ Carl ရဲ့ Jr နှင့်ပိုမိုများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အတူ 1606 စတူဒီယို Marks ခြောက်လနှစ်မြောက်။